DAAWO-Barlamaanka oo soo geba gebeeyay akhrinta labaad Hindise sharciyeedka Hanti dhowrka Qaranka – Radio Muqdisho
DAAWO-Barlamaanka oo soo geba gebeeyay akhrinta labaad Hindise sharciyeedka Hanti dhowrka Qaranka
Barlamaanka Soomaaliya kulan ay maanta ku tyeesheen xarunta golaha Shacabka waxaa ay soo geba gebeeyeen akhrinta labaad ee Hindise-sharciyeedka Hanti Dhowrka guud ee Qaranka kaas oo horey loogu soo gudbiyay golaha shacabka.
Kulanka Barlamaanka ee maanta ayaa waxaa goob joog ka ahaa Hanti Dhowraha Qaranka Dr Nuur Jimacaale Faarax iyadoo mudaniyaasha golaha shacabka ay su’aalo weydiiyeen Hanti dhowraha Qaranka.
Hindise-sharciyeedkan ayaa dhowaan waxaa Barlamaanka Soomaaliya uu dib ugu celiyay guddigga Maalliyadda ee Barlamaanka, waxaana mudaniyaasha ay ka dhiibteen tallooyinka wax ku oolka ah iyagoo sidoo kale soo jeediyay in qodobada qaar wax laga bedelo.
Xoghayaha Guddigga Maalliyadda iyo la Xisaabtan hay’adaha dowladda Xildhibaan Cismaan Xaaji Cali ayaa sheegay in mudanayaasha golaha shacabka looga baahanyahay in ay qodab qodab uga hadlaan 37 qodob oo uu Hindise sharciyeedkan ka kooban yahay.
Dr Nuur Jimacaale Faarax Hnati dhowraha Qaranka ayaa Xildhibaanada ka codsaday in ay meel mariyaan Hindise sharciyeedkan si loo dardargeliyo howlaha canshuuraha iyo dakhli aruurinta.
Afhayeenka Barlamaanka Madune Maxamed Sheekh Cismaan ‘Jawaari’ oo kulanka maanta shir gudoominaayay ayaa faray Hanti Dhowraha iyo guddiyada Madax banaan in Dastuuriyan loo baahan yahay in sanadkii mar ay Xildhibaanada horkeenaan wax qabadkooda.
Hindise sharciyeedkan ayaa gudoonka Barlamaanka waxaa uu qorsheeyay in la soo geba gebeeyo ka hor Kalfadhiga 5 aad ee Barlamaanka.
Madaxweynaha Puntland oo maanta furey Mashruuca ka soo kabashada isbedel Cilmilada Soomaaliya”sawiro”